Sat, Apr 21, 2018 | 19:24:51 NST
छोरीलाई पढाएर के हुन्छ भन्ने मानसिकता भएको हाम्रो समाजले यो कुरा बुझोस् कि, छोराको विहेमा गर्ने लगानी छोरीको शिक्षामा खर्च गर्दा अवश्य फल पाइन्छ ।
मानिसहरु देशमा रोजगारीको संभावना नदेखेर विदेश गइरहेकाहरुका छन् । बुटवलका एक जना कुल्फी पसले दाइले दिनको ६ हजारसम्म कमाउछु भन्दा नेपालीले नेपालमै केही नगरी किन कामका लागि विदेश धाएका होलान भन्ने लाग्यो ? बुझ्नै सकिएन ।
उज्यालो ठूल्ठूला नेताको भाषण र शहरमा केन्द्रित भो कि जस्तो लाग्यो । त्यसैले विकट ठाउँका नागरिकले देखेका र पाएका खबर पनि रेडियोसम्म पुर‌्याउन सक्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि ?
अहिले नक्कली डाक्टरको मात्रै खोजी र छानविन भैरहेको छ, तर ती नक्कली डाक्टर उत्पादन गर्ने मेडिकल कजेलको छानविन चाँही कहिले हुन्छ ?
अफगानिस्तानमा भएको हत्याको घटनापछि पनि सरकारले अवैधानिक मेनपावर बन्द गरेन र देशमै रोजगारीको व्यावस्था गरेन भने हरेक साल हामीले सुन्दै आएको दुखदायी घटनाको श्रृखला रोकिने छैन ।
डाक्टर पक्राउको विरोधमा डाक्टरले आन्दोलन गरेर सेवा ठप्प गराउने डाक्टर साथीहरुको तरिका चाँहि मन परेन ।
केपि ओली त हावा कुरा गर्न माहिर भनेको त हावाबाट बिजुली निकाल्न पनि माहिर रहेछन त ।
नक्कली भन्ने चिज कुनै क्षेत्रमा पनि ठिक होइन । त्यसैले यसरी खुलेआम नक्कली कार्य गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ ।
प्लस टु ले डि प्लस आउने विद्यार्थीलाई कुनै पनि कलेजमा भर्ना नलिने भनिएको छ, अब के ति विद्यार्थीहरु विदेशिने ? सरकारको अर्को कुनै अप्सन छैन ?
नाकाबन्दी हुदा बढेको भाउ अझै नि उस्तै छ । खोइ त सरकारी निकाय ? खोइ उपभोक्ता हित संरक्षन मञ्च , जति भाउ भने त्यति नै तिर्नुपर्ने हो ?
नक्कली भुकम्प पिडितलाई अनुदान दिएर बास्तविक पिडितले हेरेको हेरै हुने अवस्था नआओस् । सरकारले दिने २ लाख अनुदान बास्तविक भूकम्प प्रभावितले नै पाउन ।
अरु देश बन्दै गएका छन् तर विडम्वना हाम्रो देश बन्द नै छ ।
कालो रात बनी आयो जेठ १९ तिथिमा, रगतको खोलो बग्यो नारायणहिटीमा, कुन पापी थिए दैव कसले गरे विनास, रहस्य लाई लुकाएर जनता पारे निरास ।
बजेटलाई लियर टिप्पणी गरेर नबसौ अब कार्यक्रम तिर लाग्नुपर्छ, बजेटमा भएका आधा कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि देशले नयाँ रुप लिन सक्छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब त २५ प्रतिशतले बढ्ने भएछ । अब यसले गर्दा महंगी चाहिँ कति प्रतिशत बढ्ने हो ? तलब भन्दा महङगी बढी भए तलब बृद्धिको के अर्थ ? यता पो ध्यान दिने हो कि ?
​बजेट आउनुभन्दा पनि बजेटको सहि ठाउमा,सहि तरिकाबाट कार्यान्यन गर्नु महत्वपुर्ण कुरा हो, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
निर्मल भण्डारी निभ
प्रचण्डलाई अदालतमा बोलाईयो भनेको सुन्दानि दुख लाग्छ । फेरि एकपटक वेद र पुराण छोएर कसम खाएर भन्छु पुन असत्यको विजय हुन्छ ।
सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगका सदस्यले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई माफी नदिने भनेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०६३ साल पछि कानूनी राज्यको खिल्ली निकै उडाएका छन् दल र दलका नेताले । हेरौं अब के हुन्छ ।
सरकारले बजेट बाँडफाँड गर्दा कसैलाई काखा,कसैलाई पाखा नगरोस् । शिक्षा,पर्यटन,उद्योग,विकास लगायत सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट छुट्याओस् ।
शान्तीका दुत बुद्ध तिमी मनमनमा छाएका छौ । अहिंसा र सत्यको उपमा पाएका छौं ।। भारतले भारतमा जन्मेका हुन भन्दा पनि । छाती फलाएर नेपाली नै हुँ भन्ने प्रमाणित गरेका छौं ।।
राति ११ बजेसम्म काठमाडौंमा पर्यटक हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं, वैशाख ८ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले काठमाडौंमा पर्यटकले रातिसम्म हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
दक्षिण एसियाली जुडो च्याम्पियनसिप : नेपालले जित्यो एक स्वर्ण, चार स्वर्णसहित भारत अग्रस्थानमा
​आईपीएल : कोलकाताले पञ्जाबलाई दियो १९२ रनको टार्गेट
संकटालाई हराउँदै सिक्किम युनाइटेड क्वार्टरफाइनलमा
उद्दारलाई प्राथमिकता, गलत काम गर्नेलाई कानुनी उपचार : नेपाली दूतावास युएई
​डोटीमा जीप दुर्घटना : ३ को मृत्यु, १६ जना गम्भीर घाइते